बीमाबारे तपाइँलाई यी कुरा थाहा छ ? - SandeshMedia.com
बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको फरक के हो ?
– बीमा कम्पनीले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसारको दायित्व वहन गर्दछ र बाँकी दायित्व पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्दछ, जसको कारणले प्रथम बीमा कम्पनी आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुन्छ । किनकि बढी रकमको दाबी भुक्तानी भएमा पुनर्बीमा कम्पनी पनि क्षर्तिपूर्तिको दायित्वभित्र पर्दछ । पुनर्बीमा कम्पनी विदेशी–स्वदेशी जे होस्, बीमितको सरोकार रहँदैन । दाबी भुक्तानी आफूले बीमा गरेको कम्पनीले गर्दछ र बाँकी हिसाब मिलान बीमक र पुनर्बीमकले गर्दछन् ।
० लघुबीमा पनि प्रचलित छ, यो भनेको के हो ?
– यो बीमा योजना भनेको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपमा पिछडिएका आमनागरिकको लागि प्रयोगमा ल्याइएको बीमा योजना हो, जसमा न्यूनतम शुल्कमा बीमाको जोखिम वहन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
० बीमा किन गर्ने ?
– थोरै बीमा शुल्क तिरेर धेरै अर्थिक जोखिम वहन गरी बीमित तथा आश्रित परिवारलाई आर्थिक रूपमा तल झर्न नदिनलाई बीमा गरिन्छ ।
० बीमामा कर छुट कसरी हुन्छ ?
– आम्दानीको करयोग्य आयमा वार्षिक २० हजारसम्मको बीमा शुल्क घटाई बाँकी आम्दानीमा मात्र नेपाल सरकाले कर लिन्छ ।
० बीमा समितिको कार्यकाल र सञ्चालकको समय र सङ्ख्या कति हुन्छ ?
– बीमा समितिको कार्यकाल चार वर्ष र पाँच जनाको सञ्चालक समिति हुन्छ तर नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेमा उक्त सञ्चालक समितिलाई एक कार्यकाल थप्न सक्ने छ ।
० बीमा समितिको सञ्चालकहरूको योग्यता कति चाहिन्छ ?
– कानुन, बैङ्किङ, वित्तीय, व्यवस्थापन बीमा वा सम्बन्धित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट स्नाकोत्तर पास गरेको व्यक्ति योग्य हुने छन् ।
० बीमा कम्पनी स्थापना गर्न कसले अनुमति दिन्छ ?
– बीमा समितिले स्वीकृति वा अनुमति दिनुपर्दछ ।
० नेपालमा कतिवटा बीमा कम्पनी छन् ?
– नेपालमा हालसम्म ४० वटा बीमा कम्पनी छन्, जसमा २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र एउटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् ।
० नेपालमा बीमा व्यवसाय कुन मितिबाट सुरुवात भयो ?
– नेपाल बैङ्क लि.को स्थापना वि.सं. १९९४ मा भएपछि बीमाको आवश्यकता देखेर वि.सं. २००४ सालमा नेपाल बैङ्कको अग्रसरतामा उसले बढी सेयर खरिद गरी तत्कालीन माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना ग¥यो र हाल नेपाल इन्स्योरेन्सको नामले कार्य सञ्चालन भइराखेको छ ।
० बीमा ऐनअन्तर्गत बीमा कम्पनीले कति प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ?
– बीमकको (कम्पनीको) जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्दछ ।
० बीमकले कर्मचारीलाई कति प्रतिशत सेयर भाग लगाउनुपर्दछ ?
– सर्वसाधारणलाई जारी गरेको २ देखि ५ प्रतिशत सेयर छुट्ट्याउनुपर्दछ तर यसमा कर्मचारीको सङ्ख्याले पनि सेयर निर्धारण गर्दछ ।
० बीमा अभिकर्तालाई कमिसन कति हुन्छ ?
– मुनाफामा सरिक हुने जीवन बीमा २० वर्षभन्दा बढी अवधिको बीमा गर्दा दुई वर्षसम्म बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत र ८ वर्षसम्म ५ प्रतिशत कमिसन बीमा अभिकर्ताले पाउँछ भने १५ वर्षसम्मको अवधिको बीमामा प्रथम वर्ष २५ प्रतिशतको दरले कमिसन उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै, १० देखि १४ वर्ष अवधिको बीमामा पहिलो र दोस्रो वर्ष १५ प्रतिशतको दरले बाँकी ५ प्रतिशतको दरले कमिसन उपलब्ध गराइन्छ । ८ देखि ९ वर्ष अवधिको बीमामा दुई वर्षसम्ममा १० प्रतिशत र बाँकी ५ प्रतिशतको दरले कमिसन दिइन्छ । त्यस्तै, ५ देखि ७ वर्ष अवधिको सावधिक बीमामा प्रथम वर्ष १० प्रतिशत र बाँकी ५ प्रतिशतको दरले कमिसन दिइन्छ ।